दशै नजिकिदै गर्दा पुर्व युवराज पारसको घरमा चो’री, काठमाडौँबाट २०७ जना चोरहरु समा’तिए (भिडियो हेर्नुस) – Ap Nepal
पुर्व युवराज पारस साह बस्दै आएको पोखरामा रहेको फ्लाटमा चो’री भएको छ । चो’रीमा उनकै फ्लाटमा काम गर्दै आएका शिव गौतम संलग्न रहेको प्र’ह’रीले जनाएको छ ।
चो’रिमा संलग्न रहेको अभियोगमा शिव गौतमलाई काठमाडौँ मित्रपार्कबाट प्रहरीले प’क्रा’उ गरेको काठमाडौ प्र’ह’री प्रमुख एसएसपी अशोक शिंहले बताएका छन । प्र’ह’रिका अनुसार पारस साहको फ्लाटमा कामदारका रुपमा बस्दै आएका गौतम चो’रि गरेर त्यहाँबाट भागेर काठमाडौ भागेका थिए ।
पारस साहको निवासबाट क्यामेरा, आइप्याड, दुरबिन लगायतका सामानहरु चो’री भएको प्र’ह’रिको भनाई छ । काठमाडौँको मित्रपार्क स्थित न्यु राप्ती गेस्ट हाउसमा बसिरहेको अवस्थामा प’क्रा’उ परेका शिव गौतमको साथबाट चो’री भएका उक्त सामानहरु पनि बरामत भएको काठमाडौ प्र’ह’रिले जनाएको छ
गौतमलाई चोरी कसुरमा म्याद थप गरि अनुसन्धान गरि रहेको काठमाडौँ प्र’हरीको भनाई रहेको छ । यस्तै काठमाडौ प्र’हरीले काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा चोरिमा संलग्न रहेका अन्य २०७ जनालाई पनि प’क्राउ गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौंका विभिन्न स्थान र सवारीसाधनमा पाकेट मार्ने तथा चो’रिमा संलग्न भएका २०७ जनालाई प्र’हरीले काठमाडौको विभिन्न स्थानबाट प’क्राउ गरेको जनाएको छ । सवारीसाधनमा समूह बनाई यात्रुहरुको पाकेटमार्ने तथा विभिन्न घरहरुमा चो’री गर्दै आएका उनिहरुको ठूलो समूह नै प’क्राउ परेको प्र’हरिको भनाई छ ।
उक्त चो’रहरुले चो’री गर्नका लागि आफ्नै छुट्टै कोड भाषा प्रयोग गर्ने गरेको प्’रहरीले जनाएको छ । उनिहरु काठमाडौका बस तथा माइक्रोबसमा भएका यात्रुका साथै बजारमा किनमेल गर्ने मानिसहरुको नगद, मोबाइल, गरगहना लगायतका सामानहरु चो’री गर्ने गरेको प्र’हरीको भनाई छ ।
उनिहरुलाई काठमाडौको विभिन्न स्थानबाट चो’री गर्दै गरेको अवस्थामा प’क्राउ गरिएको प्र’हरीले जनाएको छ । पक्राउ गरिएका २०७ मध्ये १६१ जनालाई अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । ती मध्य ४६ जनाको भने अनुसन्धान पूरा गरि जिल्ला अदालत काठमाडौले कारागार चलान गरेको काठमाडौ जिल्ला प्र’हरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले बताएका छन ।
अन्यको पनि अनुसन्धान पछि जिल्ला अदालतमा चो’री कसुरमा मुद्दा द’र्ता गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाई रहेको छ ।
काठमाडौमा बस तथा माइक्रोबसमा चो’रि र पाकेट मारको बिगबिगी बढेको गुनासो बढे पछि प्र’हरीले त्यसमा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्बाहि अगाडि बढाएको थियो ।
उनिहरुको ठुलै गिरोह रहेको अनुसन्धानबाट खुले पछि प्र’हरीले बिशेष अनुसन्धान र खोजी कार्य गरेको थियो । सादा पोसाकका प्र’हरील पनि व्यापक रुपमा परिचालन गरि उनिहरुलाई प’क्राउ गरिएको प्रह’रिको भनाई छ । चो’रीमा संलग्न गिरोहको छुट्टै कोड भाषा प्रयोग गर्ने गरेको खुल्न आए पछि प्रह’रीले ल्यसैलाई आधार बनाएर खोजी कार्य तिब्र बनाएको थियो । अब दशै तिहारको समयमा झन धेरै चोरी हुने भएको प्रहरीले त्यसलाई निगरानीमा राखेको बताएको छ ।
Prevबजार अनु, गमन तीव्र : तीन वर्षदेखि म्याद गु ज्रिएका खाद्यान्न फेला
Nextबलिउड अभिनेता अनुपम खेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नेपालमा :यसो भन्छन् हेर्नुहोस भिडियो सहित
एक रुपै;या खर्च न; गरी बिहे गरेका भा’इरल जोडीलाई, ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे (भि,डियो सहित) (32722)
आज ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ !! तोलाको कति पुग्यो त? हेर्नुहोस्..